Joinha | GIGALight
Yepamusoro-mhanyisa Optical transciver hardware yekuvandudza maneja
Wuhan / Shenzhen tenzi
1. Master degree kana pamusoro pakukurukurirana kwemaziso, anopfuura makore masere ruzivo mukugadzirwa kwezvakawanda zvemakwenzi ekumhanya-mutsetse-wedhi Optical modules;
2. Kubudirira kusimudzira ruzivo rwemagetsi transceivers pamusoro 100G, ane ruzivo mune dhizaini dhizaini uye nzira dzekuyera;
3. Kuziva neakakwira-anomhanya transceiver modulation nzira, musimboti uye DSP;
4. Iva nehunyanzvi hwekudzidziswa kwechikwata uye ruzivo rwekutarisira musangano;
5. Yakanaka technical kugadzirisa dambudziko kugona;
6. Yakanaka timu kuronga maneja uye kugona kutaurirana.
1. Tungamira timu yehunyanzvi kupedzisa mabasa ebudiriro ye100G, 200G, 400G inobatanidza transceivers optical;
2. Kutungamira-kutsvagurudza kwakasiyana akakwira-anomhanya transceiver matekiniki matsva emetropolitan nzvimbo network uye 5G kutaudzana zvikumbiro;
3. Sarudzo yemidziyo uye dhizaini yekugadzira yeanternational transceivers kuvandudza, kuvandudza chirongwa, uye kugadziriswa;
4. Kukudziridzwa kwepuratifomu yekuyedza yemamodical modhi uye iyo maitiro ese kubva pakuedza kuenda kumazhinji kugadzirwa;
5. R & D timu yehunyanzvi kugona kugona;
6. Mutengi kugadzirisa dambudziko dambudziko uye kutsigirwa.
Zvinodiwa zveJob: 1. Master degree kana pamusoro mukukurukurirana kwemaziso, anopfuura makore masere ekuziva ...
EdFA Development Hardware Injiniya
Wuhan / Shenzhen jaya
1. Bachelor degree kana pamusoro, akakura mune kutaurirana kwemaziso, makore mashanu ekushanda ruzivo muEFA nzvimbo dzakanangana;
2. Kuzivana neEDFA Optical module, Optical amplifier hardware dhizaini chirongwa uye optical simulation dhizaini, vanoziva maitiro ekugadzira ezvekukurukurirana zvigadzirwa uye kushandiswa kwemidziyo yekuedza;
3. Iva nechimwe chakabudirira purojekiti chiitiko cheEDFA Optical module;
4.Kuzivikanwa optical kutaurirana vanoshanda transceivers uye chikamu chikamu index, kugadzirwa maitiro;
5. Neruoko rwekufungidzira-pane kugona, unogona kuzvimiririra kuita kuvaka nekudzikisira kwepurasitiki yekuyedza bvunzo.
1. Inotarisirwa kune iyo optical nzira dhizaini yeFAFA transceivers, er-doped fiber amplifier uye akasiyana-siyana optical nzira network. Sarudza zvikamu zveOrical Optical nzira dhizaini, dhizaini, masekeji, zvinodiwa nesoftware, zvimwe zvigadzirwa, maseketi, mhinduro dzinoenderana nesoftware, kusarudzwa kwezvinhu, uye muyenzaniso wekuyera;
2.Organize kuiswa kwemapurojekiti ematanho akasiyana-siyana ekutsvaga nekuvandudza, kusanganisira kubva pakutanga kweprojekiti kudzamara kuwongororwa kwechigadzirwa chekupedzisira chigadzirwa kuchisangana nezvinodiwa zvekushandurwa;
3. Inotarisirwa kutevedzera uye kugadzirisa matambudziko panguva yeR & D chikamu uye muyedzo wekugadzira chikamu;
4. Inotarisirwa kune vatengi sampure yekutumira uye kugadzirisa dambudziko kune zvigadzirwa zveanternational transceiver zvigadzirwa;
5. Inotarisirwa kune dhizaini yekugadzirwa kwechigadzirwa uye kuve nechokwadi chekuti vanopfuura vanogona kugona kutengesa.
Zvinodiwa zveJob: 1. Dhigirii kana yepamusoro, yakakura mukukurukurirana, makore mashanu achishanda ...
1. Dhigirii raTenzi kana pamusoro, rakakura mukukurukurirana kwekujeka kana zvimwe zvakabatana majors, makore mashanu anoshanda ruzivo muEFA nzvimbo dzakanangana;
2. Kuzivana neECFA Optical transceivers, Optical amplifier Hardware dhizaini dhizaini uye yekuita simulation dhizaini, vanoziva maitiro ekugadzira ezvekukurukurirana zvigadzirwa uye kushandiswa kwemidziyo yekuedza;
3. Iva nechimwe chakabudirira purojekiti chiitiko cheEFAFA yemagetsi transcei;
4. Inozivikanwa nezviratidzo zvekuita uye zvigadzirwa zvekugadzira zveanternational kukurukurirana transceivers uye zvikamu;
5. Ane maoko akasimba-pane kugona, anogona akazvimirira kuvaka uye debug chigadzirwa bvunzo mapuratifomu.
2. Kuronga uye kuita zvikamu zvakasiyana-siyana zvekutsvaga purojekiti uye kusimudzira, kusanganisira kubva pakutanga kweprojekiti kudzamara kuwongororwa kwechigadzirwa chekupedzisira chechigadzirwa kuchisangana nezvinodiwa zvekushandura;
3. Inotarisira kuteedzera uye kugadzirisa matambudziko panguva yeR & D uye kugadzirwa kwekuyedza;
4. Inotarisirwa kuiswa kwemasampula evatengi uye kugadzirisa dambudziko remaoko e-transceivers zvigadzirwa;
5. Inotarisirwa kune dhizaini yekugadzirwa kwezvinhu, uye ive nechokwadi chekuti vanofamba vanokwanisa kushambadza.
Mabasa Anodiwa: 1. Dhigirii raTenzi kana pamusoro, rakakura mukukurukurirana kwekujeka kana zvimwe zvakabatana ma ...
Yakabatana Optical transceiver Software Development Injiniya
1 、 bachelor degree kana pamusoro, akakura muKutaurirana, zvemagetsi zvemagetsi engineering, otomatiki, komputa kana humwe hukama hunhu;
2.Skilled muC / C ++. VB, VC yekumusoro-danho rekushandisa software kuvandudza, nekugona kuzvimiririra nekuzvimiririra nekugadzirisa zvinetso zvehunyanzvi, makore maviri eruzivo rwebasa;
3.Ana hunyanzvi hweLinux yakadzamidzirwa sisitimu, inoziva chirongwa cheMAC chip;
2 、 pfungwa yakakura yekuita mutoro, yakaenzanirana, ine Kugona kwakanaka kugona, yakakura timu yemweya.
1. Inotarisirwa kune dhizaini uye optimization yePC-parutivi kutumira software yeavo Optical transceivers zvigadzirwa;
2. Inotarisirwa kune iyo dhizaini uye optimization ye smart mita / Cloud coding chikuva chine hukama software (PC);
3. Shandira pamwe nemunhu anotarisira chirongwa kuti apedze dhizaini uye kuongorora chirongwa;
4. Inotarisirwa kune gadziriro uye kuongorora yehukama hweprojekti dhizaini dhizaini.
Mabasa Anodiwa: 1 、 bachelor degree kana pamusoro, makuru muKutaurirana, zvemagetsi ruzivo eng ...
Yakabatana Optical transceiver Hardware Development Injiniya
1. Dhigirii raTenzi kana pamusoro, anopfuura makore mashanu ehupamhi hwekumhanya-mhanyisa kana 5G nhare yekufambisa yekufambisa system software, hardware, optics, chimiro uye maitiro ekuvandudza uye humwe ruzivo rwehupfumi mune dzakasiyana nzira;
2. Makore anopfuura matatu eCFP / CFP3 yakabatana optical transceiver module hardware redunhu dhizaini uye ruzivo rwekuvandudza. Akanyatso gadzira 2G Optical module redunhu;
3. Kujairana nenzvimbo yekushandisa yemagetsi transceivers, ane hunyanzvi mune hukama, uye anoziva nemaziso ekutaurirana dzidziso;
4. Yakakodzera mukugadzirwa kwekunyorera uye kugadzirisa dambudziko reanalog nedhijitari;
5. Yakakodzera pakakwirira -kumhanya wedunhu dhizaini, electromagnetic wave kufambisa dzidziso uye simulation, uye yakasimba wedunhu kuongorora kugona;
6.fast-yakadzidza, Iine zvakanaka kuongororwa uye kugadzirisa matambudziko kukwanisa, inogona kusangana nematambudziko ehunyanzvi hwekutsvaga tekinoroji nekusimudzira.
1. Bata mune yehupamhi hwekuvaka dhizaini uye yakananga Hardware wedunhu dhizaini uye muyedzo we100G yakabatana optical transceivers;
2. Inotarisirwa kugadzirwa kweiyo transceivers yeanternational, kusarudzwa kwechishandiso, kusarudzika dhizaini, uye kupedzisa PCB dhizaini uye kugadziriswa;
3. Kubatsira kuongorora iyo PCB dhizaini uye simulation yemapurojekiti ese, uye kubatsira kupedzisa hunyanzvi hwakaoma dhizaini kugadzirisa matambudziko;
4. Inotakura mutoro wekutarisa uye kugadzirisa matambudziko mune kugadzirwa kwechigadzirwa uye nhanho dzekugadzira miedzo;
5. Inotarisirwa kune vatengi sampure yekutumira uye kugadzirisa dambudziko kune optical transceivers zvigadzirwa;
6. Inotarisirwa kune chigadzirwa chinogadzirwa kugadzirwa kuti ive nechokwadi chekuti vanofambisa vane hunyanzvi hwekugadzira.
Mabasa Anodiwa: 1. Dhigirii raTenzi kana pamusoro, anopfuura makore mashanu ehupamhi hwekumhanya module kana 5G mobi ...
Yakabatana Optical Transceiver Development Manager
1 、 Dhigirii raTenzi kana pamusoro; yakakura mumagetsi, optoelectronics.solid ruzivo rweunyanzvi uye hunyanzvi, ruzivo rwemuindasitiri rwunosarudzwa;
2 、 Makore anopfuura matatu ehunyanzvi mune dhizaini yekubatana kwema optical module (CFP / CFP2), inoziva nheyo, kuvaka, zviyero, mapuroteni uye bvunzo zvirongwa zvehukama optical transceivers;
3 、 Kwakasimba kutaurirana uye hutungamiri kugona.Good vanhu manejimendi ruzivo.
1 、 Ita chikamu chechimiro chekugadzira kuvaka che 100G chakabatana Optical transceivers, yakatarwa hardware wedunhu dhizaini, kuyedzwa, nezvimwe .;
2 、 Inotarisirwa kune dhizaini yemodhi module, dhizaini kusarudzwa, dhizaini dhizaini, PCB dhizaini uye debugging;
3 、 Kubatsira kuongorora iyo PCB dhizaini uye simulation yemapurojekiti ese, uye kubatsira kupedzisa hunyanzvi hwakaoma dhizaini kugadzirisa matambudziko;
4 、 Inotarisana nekutevera nekugadzirisa matambudziko mukugadzirwa kwechigadzirwa uye nhanho dzekugadzira miedzo;
5 、 Inotarisirwa kune vatengi sampure yekutumira uye kugadzirisa dambudziko kune optical transceivers;
6 、 Inotarisirwa kune zvigadzirwa kugadzirwa dhizaini, uye ive nechokwadi chekuti vanopfuura vanova neyakagadzirwa zvigadzirwa.
7. Inotarisirwa kutungamira dambudziko rekugadzirisa zvinetso uye nekuona kufambira mberi kwezvikwata zvemapurojekiti;
8.Kuchina kutaurirana nevatengi uye kutora chikamu mune zvine hunyanzvi musangano.
Zvinodiwa Jobho: 1 、 Dhigirii raTenzi kana pamusoro; yakakura mumagetsi, optoelectronics.solid task ...
Dhairekita weOperical Dhizaini Yekuvandudza Unyanzvi
1. Master degree kana pamusoro, makore gumi ekushanda ruzivo;
2. Ruzivo rwakakura muhunyanzvi hwekugadzira engineering uye nzira dzekutsvagisa dzemagetsi anoshanda nemidziyo inopfuura, yakakwana mumifungo yekutanga yeoptoelectronics uye optoelectronics;
3. Kuziva nekuranga mashandiro e optoelectronic zvishandiso uye yakakwirira-anomhanya optoelectronic mudziyo wekutakura tekinoroji, zvishandiso, miedzo yekuyera uye zviyedzo zvekushandisa, uye uine ruzivo rwakakura mukutsvagiridza nekusimudzira kushandurwa kwechigadzirwa chitsva;
4. Iva nemaonero akanaka ebasa uye kugona Kugona kubata pasi pekumanikidzwa kwakanyanya uye nekumisikidza nguva.
1. Inotarisirwa kune kusimudzira uye manejimendi emakambani akakwira -mhando yekubatanidza michina;
2. Inotarisirwa yekambani yeiyo 100G / 200G / 400G chishandiso optical dhizaini uye kutakura;
3. Inotarisirwa kune rese sisitimu yeiyo mudziyo kubva mukuvandudzika kuenda mukugadzirwa;
4. Inotarisirwa kune yekugadzira tambo yekugadzira uye mudziyo wedzinesi dambudziko kugadzirisa nekuongorora;
5. Inotarisirwa kutungamira-pamucheto tekinoroji yekutsvakisa pamhepo michina
Zvinodiwa Jobho: 1. Master degree kana pamusoro, makore gumi ekushanda ruzivo; 10. Zvakafuma mu ...
Injiniya Yakabatanidzwa Yekuvandudza Mudziyo Muitiro
1. Bachelor degree kana pamusoro, Meja mune Optics kana optoelectronics, hwakasimba ruzivo rwehunyanzvi uye hunyanzvi, hukama neindasitiri ruzivo rwunosarudzwa;
2. Anopfuura makore mashanu ekushanda ruzivo; 10G / 25G / 100G APDROSA / .TOSA mudziyo wekutakura chiitiko unosarudzwa;
3. Kuziva neyekushandisa kuputira tekinoroji, senge eutectic, sirivha glue, Die / Wire Bonding maitiro, laser welding, kuramba welding, glue, coupling uye mamwe maitiro, unoziva mudziyo chip flip chip yekuisa tekinoroji inosarudzwa;
4. Kuziva nekuita, nzira dzekuyedza uye nekuvimbika zvinodiwa zvechigadzirwa zvigadzirwa;
5. Kuzivikanwe neshoko rekushanda reLD / PD uye yakabatana mutyaira chipsi, uye nzwisisawo musimboti wekushandisa weanternational transceivers side;
6. Inogona kuzvimiririra kugadzirisa matanho edanho remhedzisiro, inogona kuvandudza maitiro uye kuve nekukwanisa kugadzirira mafaira ekuita;
7. Iva nezvakanaka English kugona kuverenga uye kugona kutaurirana;
8. Iva nekugona kwakanaka kwechikwata pamwe nepfungwa yakasimba yekuremekedzwa kwechikwata, uve nepfungwa dzakakwirira dze mutoro uye muridzi.
1. Kutanga kubva pakurongwa kweprojekiti akakwirisa-anomhanya akaenzana emagetsi zvigadziriso uye zvechinyakare zvishandiso zvishandiso, kutora chikamu mumhando yekugadzira, dhizaini yekugadzira, uye dhizaini yemuchina kuti ive nechokwadi chekugadzirwa uye kurongeka kwekugadzirwa kwechigadzirwa, uye nekubatana kuunza kuiswa kwemasampula echigadzirwa kune kugadzirwa kwemazhinji;
2. Inotarisirwa kune chirongwa chekuvandudza puratifomu uye mashandiro ekugadzirisa echinyakare coaxial zvishandiso uye yakakwirira-nekukurumidza-yakabatanidzwa magetsi eminjini, uye shandura iyo yekare process platform;
3. Inotarisirwa kune dhizaini kugadzirwa gadzira nhungamiro uye maitiro ekudzidziswa ezve zvigadzirwa zvakashandurwa;
4. Inotarisirwa kuongororwa uye kuongororwa kwezvakakosha zvemidziyo, kuongororwa kwekuvimbika kwemafambisirwo, zvinoenderana nemamiriro ezvinhu, kutsigira kuvandudza uye dhizaini yechigadzirwa, uye pedzisa kugadzirira kweDEFMA.
Zvinodiwa zveJob: 1. Dhigirii repadhigiri kana pamusoro, Rakakura mumaoints kana optoelectronics, purofesa akasimba ...
Firmware Software Injiniya
1 、 Bachelor degree kana pamusoro mune zvemagetsi, kutaurirana, optoelectronics kana humwe hukama hunhu;
Makore 2、2 eMAKU firmware yekuvandudza ruzivo;
3 、 Inoshanda muC / C ++, inoziva protocol emataurirwo akadai seyedhiyo interface SPI, I2C, MDIO, RS232 uye USB nezvimwe;
4 、 Kuzivana neMCU Hardware papuratifomu yakavakirwa paC8051 neArM dhizaini, ingangoita imwe yeCCU (STM32 / Silicon Labs / ADI /ypress, nezvimwewo);
5 、 yakanaka kuraira Keil kana IAR akateedzera IDE compiler;
6 、 Inozivikanwa neinoshanda protocol yeiyo opticaltransceivers inosarudzwa, senge SFF-8472, SFF-8663, CFP MSA;
7 、 Iva nechimwe GUI kunyora (VC MFC interface kuronga) kugona software inosarudzwa;
8 、 kugona kwakasimba kuverenga uye kunzwisisa English zvinyorwa;
9 、 pfungwa yakakura yekuita mutoro, yakaenzanirana, ine Kugona kwakanaka kugona, yakakura timu yemweya.
1 、 Firmware software dhizaini nekusimudzira zvigadzirwa zveanternational transceivers uye kugadzirisa zvine hukama zvine hunyanzvi;
2 、 Kubudirira, kugadzirisa uye kuwedzeredza kweFirmware software ine chekuita nemagetsi ekushandisa ekuongorora;
3 、 Shandira pamwe neinjiniya wehardware kupedzisa dhizaini yekuongorora uye kuongorora;
4 、 Shanda pamwe nevanoedza mainjiniya kuti vapedze software kugadzirisa uye kuyedza;
5 、 Kuvimbisa iyo firmware mhando kuburikidza nekuenderera mberi kugadzirisa uye optimization;
6 、 Inotarisirwa kune gadziriro uye kuongororwa kweakanangana neprojekti dhizaini dhizaini dhizaini.
Zvinodiwa zveJob: 1 、 Dhigirii yepamusoro kana kumusoro mune zvemagetsi, kutaurirana, optoelectronics kana o ...
Mukuru Injiniya yeOptical transceivers uye Hardware
1 、 Master degree kana pamusoro, akakura mune zvemagetsi kukurukurirana kana optoelectronic engineering, anopfuura makore 2 ruzivo mukugadzirwa uye kusimudzira. Gamuchira mainjiniya epamusoro (pamusoro pemakore mashanu chiitiko);
2 、 yakakurumidza-kudzidza, yakatsunga kusimudzira kwenguva refu muindasitiri ye optoelectronic.
1 、 Kunyanya kuita wedunhu dhizaini uye dhizaini yekumhanya-mhanyisa Optical transceivers (100G / 200G / 400G);
2 、 Sarudzo yemidziyo uye dhizaini yekugadzira transceivers kuvandudza, kuvandudza purojekiti uye manejimendi;
3 、 Transceivers 'bvunzo yesitimu yekuvandudza uye maitiro ese kubva pakuedza kuenda kune akawanda kugadzirwa;
4 、 Kugadzirisa uye kutsigira vatengi zvinetso zvehunyanzvi.
Zvinodiwa zveJob: 1 、 Master degree kana pamusoro, makuru mukukurukurirana kwemagetsi kana optoelectronic ...
1 、 Dhigirii raTenzi kana pamusoro, rakakura mune optoelectronic engineering, yakajeka pakataurwa English, kuva nemaonero epasi rese;
2 、 Anopfuura makore masere ezviitiko ane ruzivo mune indasitiri yekutaurirana kwezvinhu, yepasi rose kiyi account yekutengesa ruzivo, uye zvimwe zviitiko zveindasitiri;
3 、 mutengesi wekutengesa uye yakafanana yepamusoro vatengesi maneja manejimendi chiitiko, yakanaka kune vatengi hukama maneja;
4 、 Superb kutengesa hunyanzvi uye hwakanakisa kutaudzana hunyanzvi, anokwanisa akawanda-mafambiro kumhiri kwemabhizimisi rwendo;
5 、 yapachokwadi uye yakavimbika, Kutsunga kwakasimba kuti ubudirire uye kugona kumira nekumanikidzwa kwezvinangwa zvebasa.
1 、 kuronga kuumbwa kweiyo chaiyo yemusika chikamu chikamu kutengesa nzira uye zvirongwa zvinangwa zvichienderana nekambani yose yekutengesa nzira;
2 、 Ronga mashandiro ezviitiko zvese zvekambani yekutengesa system uye simbisa nekuvandudza akasiyana siyana mitemo nemirairo;
3 、 inotarisa kuiswa kweiyo yose yekutengesa maitiro uye yakakwana mabasa ekutengesa zvinoenderana nekambani chirongwa chegore rose chekutengesa;
4 、 Inotarisirwa kune yakakwana kuronga, kuendesa uye kugovera zviwanikwa zvezvirongwa zvekutengesa;
5 、 Inotarisirwa kune maneja uye kuvakwa kwechikwata chevatengesi, kudzidziswa uye kutungamira kwevashandi vevatengesi;
6 、 Tora chikamu pakuronga kwemusika, maneja zvigadzirwa, nezvimwe
Mabasa Anodiwa: 1 、 Dhigirii raTenzi kana pamusoro, rakakura mune optoelectronic engineering, fluent in spok ...
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika Sales
5 、 yapachokwadi uye yakavimbika, Kutsunga kwakasimba kuti ubudirire., Uye kukwanisa kutsungirira kumanikidzwa kwezvinangwa zvebasa.
5 、 Inotarisirwa kune maneja uye kuvakwa kwechikwata chevatengesi, kudzidziswa uye kutungamira kwevashandi vevatengesi ；
Mabasa Anodiwa: 1 、 Dhigirii raTenzi kana pamusoro, rakakura mune optoelectronic engineering, fluent in spo ...
Mutengesi wekutengesa （Kumhiri kwekunze）
1. Bachelor degree kana pamusoro, yakanaka mukati English kuterera, kutaura, kuverenga uye kunyora, kutaurirana kwemaonero kana zvimwe zvakabatana zvinokudzwa zvinosarudzwa;
2 、 Anopfuura makore maviri ezviitiko zvekutengesa ane kiyi account, ane makore ari pakati pe2 ne 25, Zvakaitika zvekutengesa mune yeOrctic yekukurukurirana indasitiri inosarudzwa; vatsva vanopedza kudzidza vanopedza kudzidza;
3 、 Yakasimba kugona kutaurirana nehunyanzvi kutaurirana, uye kugona kuvaka vatengi vekunze vakazvimiririra;
4 、 yakanaka chifananidzo kupusa, hunhu hunofadza; Kukurumidza kufunga;
5 、 Wakatendeka uye akavimbika, ane hunyanzvi uye anokwanisa kutsungirira kumanikidzwa kwezvinangwa zvebasa.
6 、 kujairira kuenda kunze kwenyika kwebhizimusi nzendo;
7 、 Vakuru vekunze vatengesi vekunze vanobata zvakanaka.
1 、 Inotarisirwa kumhiri kwemakungwa kusimudzira, kuchengetedza vatengi uye kutaurirana kwebhizinesi mudunhu reAsia Pacific;
2 、 Inotarisana nekurongedza kurongeka, sampula ruzivo uye semuenzaniso kugamuchira;
3 、 vatengi kushamwaridzana manejimendi uye kudzorera kubhadhara;
4 、 Inotarisirwa kuongororwa kwemusika uye kutora chikamu pakuratidzira;
5 、 kuunganidza ruzivo rwemusika rwevanokwikwidza uye kubata maitiro ekuvandudza kwemusika;
6 、 Kuongorora uye kugadzirisa kwekunakidzwa kwevatengi, kubata kwekunyunyuta kwevatengi;
7 、 Wongororo yekuongororwa, kutora chikamu mukuongororwa kwemaitiro, kuita zvinangwa zvengano, uye basa rekutungamira pamwe nekutarisa vatengi
Mabasa aMabasa: 1. Dhigirii repamusoro kana pamusoro, rakanakisa mukati English kuterera, kutaura, kuverenga ...
Dunhu Rekutengesa Manager （Asia & Pacific）
2. Anopfuura makore mashanu ekutengesa manejimendi basa ruzivo muEurope, America kana Asia Pacific vatengi, vatengesi vekunze vatengi vekutengesa vekutengesa zvigadzirwa vanosarudzwa;
3. Yakasimba yekutaurirana kugona uye kugona kutaurirana, uye kugona kuvaka vatengi vekunze vakasununguka;
4, yakanaka chifananidzo kupusa, hunhu hunofadza; Kukurumidza kufunga;
5. Vakatendeka uye vakavimbika, vane hunyanzvi uye vanokwanisa kutsungirira kumanikidzwa kwezvinangwa zvebasa;
6. Nzvimbo yekushanda: Hong Kong, Hong Kong natives.
1 、 Inotarisana nekuvandudzwa kwemusika, kuchengetedza vatengi uye kutaurirana kwebhizinesi mudunhu reAsia Pacific;
4 、 Inotarisirwa kuAsia-Pacific musika kuongororwa uye kutora chikamu kuratidza;
Director Director (China)
1.Bachelor degree kana pamusoro, akakura mune zvemagetsi kukurukurirana kana yakabatana kumashure;
2. Anopfuura makore mashanu ezviitiko zvekutengesa mumidziyo yemidziyo vatengesi / yedzimba masika mumusika wekutaurirana;
3. Kushambadzira kwakanaka uye kugona kwevatengi;
4. Hunyanzvi hwakanaka uye hunyanzvi hunhu;
5. Gamuchira yakakwira-frequency bhizinesi epamusha nzendo.
1. Kuwedzera nekusimudzira bhizinesi revatengi vezvombo zvemidziyo uye nzvimbo dze data musika;
2. Inotarisirwa kune hukama hwekudyidzana kwevatengi epamusha yakakosha (vatengesi veidziyo, nzvimbo dze data nevashandisi);
3. Inotarisirwa kune yekushambadzira maneja echikwata chekutengesa;
4.Kuita chirongwa chekambani chegore rekutarisira;
5. Inotarisirwa kuitisa mashandiro emapoka epamba.
Mabasa Anodiwa: 1.Bachelor degree kana pamusoro, akakura mune zvemagetsi kukurukurirana kana ane chekuita backg ...